Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w15 10/1 p. 16
Zviri Kuitwa Kupedza Urombo
Kuguma Kweurombo Kuri Kuswedera Pedyo
Mashoko Akanaka Kuvarombo
Urombo huchazombopera here panyika?
Mwari achaita sei kuti urombo hupere panyika?—Mateu 6:9, 10.
Gore negore, urombo huri kuita kuti mamiriyoni evanhu afe nezvirwere uye kushaya zvokudya zvinovaka muviri. Kunyange zvazvo dzimwe nyika dziine upfumi, vanhu vakawanda vachiri muurombo husingatauriki. Bhaibheri rinoratidza kuti urombo hwakabvira kare.—Verenga Johani 12:8.
Kuti urombo hupere, panodiwa hurumende inotonga pasi rose. Inofanira kuva nesimba rekuti vanhu vawane zvinhu zvakaenzana uyewo inofanira kupedza hondo, sezvo dziridzo dzinowanzokonzera urombo. Mwari akavimbisa kuti kuchava nehurumende yakadaro inotonga pasi rose.—Verenga Dhanieri 2:44.
Ndiani anogona kupedza urombo?
Mwari akagadza Mwanakomana wake, Jesu, kuti atonge vanhu vose. (Pisarema 2:4-8) Jesu achaponesa varombo oita kuti udzvinyiriri uye chisimba zvipere.—Verenga Pisarema 72:8, 12-14.
Sezvakagara zvataurwa, Jesu, “Muchinda woRugare,” achaita kuti panyika pave nerunyararo, pasina kana chekutya. Munhu wese anenge ari panyika achava nemusha wake, basa rinogutsa, uye zvekudya zvakawanda.—Verenga Isaya 9:6, 7; 65:21-23.
Kuti uwane mamwe mashoko, ona chitsauko 8 chebhuku iri, Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha